Baden Wurttemberg Map နှင့်ခရီးသွားလမ်းညွှန်
Baden Wurttemberg ၏အကောင်းဆုံးမြေပုံ
Baden Wurttemberg ဂျာမဏီ၏အနောက်တောင်ဘက်ထောင့်၎င်းပြင်ဂျာမန်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင် Alsace ပြင်သစ်၏ဒေသ, ဆွစ်ဇာလန်, သြစတြီးယားနှင့် Hessen နှင့် Bavaria ၏ဂျာမန်ပြည်နယ်များအပေါ်, မြေပုံကနေ Baden Wurttemberg နယ်နိမိတ်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့။
အဆိုပါတက္ကသိုလ် 1712 မှစတငျကာကျောင်းသားရဲ့အကဉျြးထောငျရှိပါတယျ။ အဆိုပါ Hauptstra ߥတလျှောက်တချို့တွေ့ရှိမှုစျေးဝယ်လည်းရှိပါတယ်။ (Heidelberg ၏ရုပ်ပုံများ)
Heilbron နှင့် Schwabisch ခန်းမ ဂျာမဏီရဲ့တလျှောက်ဂိတ်များဖြစ်ကြောင်း ရဲတိုက်လမ်းမကြီး က Baden-Wurttemberg ဖြတ်သန်းအဖြစ်။
Rothenburg ရုံ Bavaria အတွက် Baden-Wurttemberg အပြင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ခရီးသွားဧည့်သဖြင့်ဝိုင်းပြီးလျှင်မရသောအခါသူကဂျာမနီရဲ့အများဆုံးဝိဇ္ဇာအတတ်အားအလယ်ခေတ်ကျေးရွာများတဦးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါဝင်သည်။
Karlsruhe , တောင်ဘက်ရန် "ဟုအဆိုပါ Black ကသစ်တောမှတံခါးပေါက်" သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောမြို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါမီးရထားဘူတာရုံဒေသရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အချက်အချာဖြစ်ပါတယ်။ နန်းတော် (Schloss Karlsruhe) နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွင့်လင်းသောလေထုတိရစ္ဆာန်ရုံကိုကြည့်ပါ။
Baden-Baden သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခု spa အတွက်ရေကိုဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ယူမယ့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင် spa option ကိုရှေးခယျြဘူးဆိုရင်တောင်ဒါဟာသူ့ရဲ့အများအပြားစားသောက်ဆိုင်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု oriented ဟိုတယ်များနှင့်အတူအပန်းဖြေဖို့ကောင်းတဲ့မြို့ကလေးပါပဲ။ (သင်မသိရပါဘူးလျှင် spa အတွေ့အကြုံကိုနဲ့တူသောအရာကိုတွေ့: Caracalla Terms: အရေချိုးခန်းမှာမျှော်လင့်ဖို့ဘာ ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကဂျာမနီမှာနေတဲ့နည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်စတုဂတ် 15 ရာစုအတွင်း Wurttemberg များ၏အရေအတွက်၏နေအိမ်သို့ခဲ့ပေမယ့်အလျှင်အမြန်ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးခေတ်မီခြင်းနှင့်ပွနျလညျထူထောငျ။ စတုဂတ်ယခု Porsche နဲ့ Mercedes-Benz ပြတိုက်ပိုနာမည်ကြီးကမ်းလှမ်း Spa မ်ား , အနုပညာပြခန်းနှင့်ကော်ဖီဆိုင်များ။
Ulm မြစ် Blau နှင့် Iller က join ရှိရာညုမြစ်၏လက်ဝဲဘက်ကမ်းတွင်တစ်မြို့ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာအစောပိုင်း Neolithic အခြေချခဲ့သည်နှင့်မြို့ပထမဦးဆုံး 854 မှချိန်းတွေ့စာရွက်စာတမ်းများတွင်ဖော်ပြထားသောဒါ Ulm ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်ခဲ့သည်။ Ulm ချုပ်နဲ့ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း steeple ရှိပါတယ်, မြို့တော်ခန်းမ 1370 ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် 1520 ကနေချိန်းတွေ့တစ်ခုနက္ခတ္တဗေဒနာရီရှိပြီး, မြစ် Blau ပေါ်တွင်ငါးဖမ်းသမားရဲ့လေးပုံတပုံခရီးသွားများအတွက်ပါမျက်စိသကြားလုံးအများကြီးတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။
Freiburg 1120. ဒါဟာအပြည့်အဝနာမကိုအမှီ Freiburg im Breisgau ဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အက Black သစ်တောထဲမှာစပျစ်ရည်ကိုမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ "ဟောငျးတရားစရပ် Square ကို" သာ. အရေးကြီးသောရင်ပြင်၏တဦးတည်းဖြစ်၏ ထိုသို့ Broken Glass ကို၏ 1938 ရဲ့ညအတွက်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်အထိတရားစရပ်ဤနေရာတွင်ရှိ၏။ အဆိုပါMünsterplatzမြို့တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးစတုရန်းဖြစ်ပြီး, ကြီးမားတဲ့လယ်သမားစျေးကွက်နင်္ဂနွေနေ့ မှလွဲ. နေ့စဉ်ဒီနေရာမှာရှိပါတယ်။
ရေကန် Constance ကအံ့သြဖွယ်များအပြည့်အဝမယ့်ဒဏ်ငွေအားလပ်ရက်မြေယာပူဇော်ဝန်းရံသောမြို့ကြီးများ။ Wangen ၏ The Wall ရွာ (တွေ့မြင်: Wangen ရုပ်ပုံများ) သာယာသော၏တာဝါတိုင်ရှာဖွေစူးစမ်းမအဖြစ်တစ်နည်းနည်းဝေးအိုင်ထဲကနေလေ့လာစူးစမ်းဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရပ်စေသည် Ravensburg ။
Ritter အားကစားမှာသင့်ကိုယ်ပိုင်ချောကလက်ဘား Make
Ruegen - ဂျာမဏီရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကျွန်း
မိုးတားစင်တာ Portland အတွက် Trail Blazers ဂိမ်းများအတွက်ခရီးသွားလမ်းညွှန်
မတ်လ / ဧပြီအတွက်ပျားရည်ဆမ်းခရီးမှအကောင်းဆုံးနေရာများ
တစ်ဦး Ryokan ကဘာလဲ? အဘယ်အရာကိုဂျပန်ရဲ့ရိုးရာ Inns အကြောင်းသိထားမှ
RV ကံကြမ္မာ: Badlands အမျိုးသားဥယျာဉ်
ဗိုက်ကင်းစတား Cruise နဲ့သင်္ဘောနှင့်ပတ်သက်သောစားပွဲအတွက်ပွဲတွေထဲမှာနှင့်အစားအစာ
အရီဇိုးနား Mills က Mall က
နယ်သာလန်နိုင်ငံ WWOOF - တဒတျချြလယ်ယာအပေါ်စေတနာ့ဝန်ထမ်း
အဆိုပါ Lyceum - လက်ဇန္ဒြီးယားရဲ့သမိုင်းပြတိုက်
ကော်လိုရာဒိုအတွက်တပ် ချ. Go မှအလှဆုံးနေရာများ
Reno နှင့် Sparks န်းကျင် pawn အရောင်းဆိုင်များ